तिहारपछि औषधि बोकेर ड्रोन गाउँ गाउँमा पुग्छ: डा. महावीर पुन - Maxon Khabar
Home / Technology / तिहारपछि औषधि बोकेर ड्रोन गाउँ गाउँमा पुग्छ: डा. महावीर पुन
तिहारपछि औषधि बोकेर ड्रोन गाउँ गाउँमा पुग्छ: डा. महावीर पुन
एसियाको नोबेल पुरस्कारको रुपमा हेरिने म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन मगरले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत विज्ञान तथा प्रविधि को क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । उनीसँग मिलेर सयौँ इन्जिनियर नेपाली परिवेश सुहाउँदो आविष्कार मा केन्द्रित छन् । काठमाडौं, चितवन, धरान, जनकपुर र पोखरामा अनुसन्धानको काम भइरहेका छन् । आविष्कार केन्द्रले अहिले कृषि, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, बायोमेडिकल, पर्यटनलगायतका १६ क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परीक्षण गरिरहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम मेडिकल ड्रोनको आविष्कार अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाली स्याटेलाइट नेपस्याट-१ ले अन्तरिक्षबाट श्रीलंकाकाे स्टेन प्रयाेग गरी खिचेकाे तस्बिर हेर्नुस
मेडिकल ड्रोनले नेपालका भौगोलिक हिसाबले विकट स्थानमा रहेका हेल्प पोस्टहरुमा स्वचालित मानवरहित प्रविधिको माध्यमबाट औषधि पु¥याउने काम गर्नेछ । नेपालमा मेडिकल ड्रोनको आविष्कारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यानसमेत खिच्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर इन्जिनियर्स नेपालले आविष्कार केन्द्रमा अध्यक्ष पुनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
चार–पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्ने ड्रोनलाई ‘मल्टि रोटर’ भनिन्छ । अर्को भनेको ‘फिक्स विन्ज ड्रोन’ हो । जसले २० देखि २५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्छ । त्यस्तै, ‘हाइब्रिड ड्रोन’ आवश्यक परेको खण्डमा कुनै ठाउँमा बस्न र कुनै सामान ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छ । यसको दूरी ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन । यो ड्रोनले उचाइअनुसार यात्रा गर्छ । हामीले यी सबै ड्रोनमा काम गरिरहेका छौँ ।
पहाडि क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न विभिन्न कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले भौगोलिक रुपमा विकट रहेका त्यस्ता स्थानहरुमा औषधि पु¥याउन हामीले ड्रोनको परिकल्पना गरेका हौँ । पहाडी भेगमा उडान भर्न सक्ने गरी ड्रोनको तीन हजार मिटर उचाइसम्मका बस्तीमा सफल परीक्षण भइसकेको छ । ड्रोन कुन–कुन ठाउँमा उडाउने भन्ने लक्ष्य भने अहिल्यै आविष्कार केन्द्रसँग छैन । ड्रोन बनाइसकेपछि जो सेवा चाहियो भनेर आउँछन्, उनीहरुलाई सेवा उपलब्ध गराइनेछ । तर, म्याग्दीमा यसको परीक्षण गरेकाले त्यहीँबाट ड्रोनको उद्घाटन गर्ने हाम्रो योजना हो ।
हामीले १६ वटा काम गरिरहेका छौँ । ड्रोनपछि पुरानो गाडीलाई ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउने काम प्राथमिकतामा छ । यो सफल भएपछि अर्को भर्सनका रुपमा नेपाली परिवेश सुहाउँदो कच्ची सडकमा चल्ने कार पनि बनाउनेछौँ । यसबाहेक किसानका लागि उत्पादित तरकारी लामो समयसम्म नबिग्रियोस् भनेर त्यस्तो सिस्टमको प्रविधि आविष्कार गर्दै छौँ । कपडा काट्ने, कम तापमानबाट बिजुली निकाल्ने, बाँदर लखेट्ने, सेल रोटी पकाउने प्राविधिक औजारको विकासमा काम भइरहेको छ ।
कुखुराको दानाको विकास गर्ने, सिन्के धूप बनाउने प्रविधि तथा स्वास्थ्य र पर्यटनका लागि आवश्यक एप्लिकेसनहरु बनाउनेजस्ता काम भइरहेका छन् । नेपाली समाज र परिवेशमा यी सबै सुहाउँदा र आवश्यक कामहरु हुन् ।